Unyanzvi Hupenyu Hwakaratidzirwa Ku Skyrocket Kubudirira Kwako - Blog
Unyanzvi Hupenyu Hwakaratidzirwa Ku Skyrocket Kubudirira Kwako
Hupenyu hausi nyore. Isu tese takazvarwa munyika ino tiine hunyanzvi uye kugona, asi hazvireve kuti hatigone kutora uye kudzidza huwandu hwakawanda hwehumwe hunyanzvi munzira ...
… Hunyanzvi huchagadzirisa nzira yedu.
… Hunyanzvi hunogona kuvhura mhando dzese dzemadhoo.
Nehurombo, budiriro haisi kuzodzikadzika pasi pamberi pedu patinenge takagara pasofa.
Kubudirira kunouya kune avo vanozvishandira. Izvo zvinouya kune avo vanozvitarisa ivo, uye nepanyika yakavapoteredza, uye funga kuti vangakura sei uye kukura zvinoenderana kuti vabudirire.
Kubudirira kunoreva zvinhu zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Haisi imwe-saizi-inokodzera-yese mhando yechibvumirano.
Kune vamwe vanhu, iyo yechinyakare chiratidzo cheimba ine chena mapikicha fenzi, akakwana mudiwa, uye gaggle yevana inogona kuve yekupedzisira dudziro yekubudirira.
Vamwe vanhu vanogona kunzwa sekunge vanyatsozvigadzira pavanenge vakamira muhofisi yavo yegirazi pamusoro pechikwiriso, vachisheedzera kupfura.
Kune rimwe divi, imwe pfungwa yevamwe yekubudirira inogona kuve nekutarisisa pamweya.
Vamwe vanogona kunzwa sekunge vakazviita pavanenge vari ivo mukuru wavo, uye vamwe vanhu vanogona kunge vachipfura kurwisa nyika dzese dzepasi kubva pamazita avo vasati vafa.
Asi chero chinangwa kana zvinangwa zvaunazvo mupfungwa, kana kunyangwe iwe usina chokwadi chaizvo kuti chii chauri kuda kunze kwehupenyu, kune humwe hunyanzvi hunogona kugadzirwa nemunhu wese hunovabatsira kusvika ipapo.
Zvisinei hupenyu hwakaoma hungaratidzika, pane zvinogara zviripo zvaunogona kuita uye kubudirira pauri. - Stephen Hawking
Kushaikwa kwekugona kutarisa pane chimwe chinhu basa kunogona kuva chipingaidzo chikuru chebudiriro.
Kana iwe usingakwanise kuzvishandira kune chimwe chinhu kweanopfuura maminetsi mashoma panguva uye uchinetseka kudzivisa zvinovhiringidza, iwe haugone kukwanisa kuwana chero zvinangwa zvaunozvisarudzira , chero vangave vari.
2. Kutarisira Nguva
Kugona kushandisa nguva zvakanaka uye kuwana zvakanyanyisa kubva zuva rega rega kuchaita kuti kubudirira kuvepo zvakanyanya.
Izvo zvakare zvinoreva kuti inouya nekukurumidza nekukurumidza kupfuura iwe zvawaimbofungidzira.
Ipo kubata kwekuverengera pano neapo kuchishandiswa - sezvo zvichigona kubvumira uropi hwedu kugadzirisa ruzivo - kana kuverengera kukava kwedu kwekutadza uye tikasaita zvakanakisa maminetsi akakosha atakapihwa, mazuva nemakore anogona kutsvedza kuburikidza tisina kuzadzisa zvinangwa zvedu…
… Uye nekukurumidza kana nguva inotevera inopera.
3. Kuita sarudzo
Uhu hunyanzvi hunorwiswa nemarudzi ese evanhu. Vamwe vedu tinowana sarudzo hombe, zvine chekuita nemabasa kana hukama, hwakaomesesa, uye izvo zvinonzwisisika.
Vamwe vanhu vanoona zvinhu zvikuru zviri nyore, asi vachirwira nezvinhu zvidiki sekusarudza kubva kumenyu kana kunhonga pendi, vakagutsikana kuti vanozozvidemba nesarudzo yavo.
Uye vamwe vedu havagone kubata chero mhando yesarudzo zvachose, vachida kungoviga misoro yedu mujecha uye kurega vamwe vanhu vatore matomu.
Kwese kwaunowira pamatanho ekutora sarudzo, uchizvirovedza kuita sarudzo dzako pachako, uchiteerera kune zvese moyo wako nemusoro wako, zvinogona kuvhura ese marudzi emasuo.
Kuita sarudzo nemoyo wese uye usingafungire pamusoro pe 'ko dai' zvinoreva kuti unogona kuzvikanda muzvinhu, moyo nemweya, uye woita chero chaunofunga kuti chishande.
4. Achiti Kwete
Vamwe vanhu vane hunyanzvi uhu zvakasikwa, asi vazhinji vedu, kunyanya vakadzi munharaunda yedu yemadzitateguru, tine dambudziko rekuti kwete kana zvinhu zvikabvunzwa kwatiri, kunyangwe patakatambanudzwa kusvika pakukwanisa.
Kana isu tichida kuva nenguva yekugona kugadzira hupenyu hwezviroto zvedu, hatigone kushandisa edu akakosha maawa tichiita zvinhu zvatisingade chaizvo kuita kana izvo izvo moyo yedu isiri chaizvo mukati.
Kudzidza kuti kwete pazvinenge zvichidikanwa idanho rakakura rekuzvisunungura nekuzvimisikidza panzira yekubudirira.
Pane chinhu chakadai sekunyanya kushivirira, uye isu tese tinofanirwa kuziva kuti iripi tambo iyi, asi hutano hutano hwekutsungirira hwakakosha zvakanyanya muhupenyu huno.
Chero nzira yatiri munzira, tese tichasangana nezvipingamupinyi, kunyangwe zviri muchimiro chevanhu kana mamiriro ezvinhu.
Kunyangwe kupopota uchirwisa izvo zvipingaidzo uye kupomba pamasuo iwayo dzimwe nguva kungave mhinduro, kazhinji kazhinji kwete, ingori smidgen yemoyo murefu inogona kugadzirisa marudzi ese ezvinetso.
Zvinhu zvakanaka chaizvo zvinouya kune avo vanomirira.
Kukosha kwekugona kuzvitaurira zvakajeka kunowanzo kuvezwa pasi.
chii chinonzi kushungurudzwa kwepamoyo muhukama
Kugona kutaurirana zvatinoda kana zvatinoda kune vamwe nenzira yakajeka, tisingarove nezvegwenzi kana kukonzera kusanzwisisana, hunyanzvi hwatinogona kushandira tese.
Ndiyo imwe inogona kutibatsira kukudziridza hukama hwakanaka, kungave ivo vega kana hunyanzvi, uye kubudirira.
Hapana akakwana. Hausi, uye havasi vanhu vakakukomberedza. Izvi zvinoreva kuti, munguva pfupi inotevera, vanhu vanozo nyonganisa.
Ivo pachavo vanogona kuita chimwe chinhu chisina kunaka, kana zvinogona kunge zviri nekuda kwemamiriro ezvinhu avanogona kudzora, asi kunyangwe hazvo inyaya ingakonzera iwe, zvakakosha kuti uzive kuti tiri vanhu, uye tese tinokanganisa.
Kugona kunzwisisa izvozvo, uye kuregerera uye kukanganwa pane kutsamwa uye kupomera vamwe Unogona kuita zvishamiso munzvimbo dzese dzehupenyu hwako.
Kana iwe usina chivimbo mukati mako, zvakaoma kutarisira kuti vamwe vavimbe newe.
Kuzvivimba kwakakosha pakubudirira, sezvo kubudirira mune chero chimiro kana chimiro kunogara kuchizviisa kunze uko neimwe nzira kana imwe.
Kana iwe usina chivimbo mukati mako, haungangove wakashinga zvakakwana kuti unamise musoro wako pamusoro pechidziro.
Kushivirira, kutsungirira uye ziya zvinoita musanganiswa usingakundike webudiriro. - Chikomo cheNapoleon
9. Kuda kuziva / Chido chekudzidza
Chirevo 'kuda kuziva chakauraya kati' chakanyatsogadzirwa nemunhu aida kuchengetedza vamwe vanhu mumabhokisi avo.
Kunyange kuda kuziva kwakanyanya kuchikupinza mumamiriro ezvinhu anonamira pano neapo, mushonga unogonesa unoreva kuti unogara uchida kudzidza.
Inokutyaira kuti uwane zvimwe nezve nyika yakakukomberedza, nezve vamwe vako vanhu, uye nezve iwe pachako.
Chero ipi pfungwa yako yekubudirira, hupenyu hunogutsa zvinoreva kuti haumbomira wakamira uye haumire kuwedzera pfungwa dzako, uchishamisika kuti chii chakamirira kukona inotevera.
Kubudirira hakuitike kamwe kamwe. Zvinotora nguva, uye zvinotora kusimba uye kuzvipira.
Kana iwe ukakanda mapfumo padambudziko rekutanga kana kana zvinhu zvikasaitika nekukurumidza sezvingatarisirwa, hauzombosvika kwaunoda kuenda.
11. Kuda Kuita Ngozi
Hupenyu hunotanga kumucheto kwenzvimbo yako yekunyaradza . Kana zano rako rekubudirira rakasiyana neizvo zvinoita hupenyu hwako izvozvi, saka nzira chete yekuenda ikoko ndeyekuzviisa kunze uko uye kuyedza mhanza yako.
Iko hakuna kuvimbiswa muhupenyu huno, uye kana ukabatirira kune yakachengeteka ivhu, iwe haungangodaro kuenda chero nekukurumidza.
Iyi ndiyo imwe inogona kutorwa zvakanyanya kana ukasangwarira. Kana kurova vamwe kukava kwako kwekutarisa kukuru, iwe ungangodaro uchirasa nzira yezvinhu zvakakosha kwazvo kwauri.
Nekudaro, rwizi rwemakwikwi ane hushamwari rwakatinakira isu tese. Inogona kuve mutyairi mukuru uye anokurudzira. Zvinonyanya kunaka kana iwe uchikwanisa kukwikwidza kumwe kukwikwidzana neako wega wega wega wega.
Kugona kumhanya mamaira mashoma kupfuura zuva rapfuura, ita bhizinesi rako riite zvirinani kupfuura gore rapfuura, kana kuzviisa iwe kunze mune yemagariro nenzira yausingazotya kuita pamutambo wekupedzisira wawanga uripo ndiwo wese makwikwi aunonyatsoda kuti urambe uchikura semunhu.
13. Sense YeKunyara
Kunzwa kuseka kwakakosha kuti urarame pasi rino, uye zvinonyanya kukosha kana iwe uchida kubudirira.
Zvinhu zvinoenda zvisirizvo uye vanhu vanovhiringidzika, uye iwe unofanirwa kugona kutarisa kune inosetsa divi rezvinhu pavanenge vachiita.
Kana iwe usina mwenje mumaziso ako uye nekamwe moto mudumbu mako uye uchifadzwa nemaprojekiti auri kushanda kana izvo zvinhu zvauri kushandisa nguva yako pazviri, iwe uchanetseka kuti uwane kurudziro yekuwana chero kupi.
Muyero wekushingairira zvese, kubva kuchirongwa nyowani mangwanani eMuvhuro kusvika pakushanya kwevhiki, kunogona kukusundira mberi uye kuita kuti nyika iratidzike seyakaipisisa.
Ipo paine nguva nenzvimbo yekubvumirana, tese tinofanira kuziva nguva yekuzvishingisa uye kusapunzika.
Kuti tisvike chero kupi muhupenyu huno, isu tinofanirwa kuve takagadzirira kukumbira nekuudza vamwe vanhu zvatinoda.
Kunyangwe paine vanhu vazhinji kunze uko vakazvikurisa nekutsika vamwe vese, ivo vari kungonakidzwa neimwe mhando yekubudirira.
Kune chero munhu ane pfungwa yekubudirira isingasanganisi kucheka vamwe vanhu pasi kuti vakwire pamanera, kufunga kwevanhu vakatikomberedza kwakakosha.
Zvinhu zvinomwe Zvinobudirira Vanhu Havana Kubvumirana
Tsika diki diki Vakabudirira Vanhu Havatambisi Nguva Yavo Pana
17. Maonero Etsika
Kuremekedza pasi redu uye vese vagari varo kwagara kuri mucherechedzo wekubudirira mumabhuku mazhinji evanhu, asi muzuva rino nezera, zvakatonyanya kupfuura nakare kose.
haaina chiratidzo icho mauri
Kugara uchifunga zvinodiwa nevanhu vako vese, mhuka, uye nyika yatiri kurarama zvinoreva kuti budiriro ichave inogutsa zvakanyanya uye yakagadzikana.
Hapana murume kana mukadzi chitsuwa, uye hausi kuzosvika chero iwe wega. Mativi ese ehupenyu hwako akaumbwa netiweki hombe yevanhu, zvese zvinoonekwa uye zvisingaonekwe
Kunzwisisa izvo zvinobatsira iwe kubvuma kuti iwe haugone kunyatso kuzviita wega.
Kuti ubudirire, unofanirwa kukwanisa kuvimba nekushanda nevamwe vanhu. Iwe unofanirwa kukwanisa kubhowa mazano ako paari, uye kutora mazano avo pabhodhi nekudzoka.
Pakati pako, unogona kugadzira zvinhu iwe zvausina kana kumbozvifungira.
Pakupedzisira, kubudirira kwerudzi rupi zvaro kunogara kuchisanganisira hutungamiriri hweimwe tsananguro kana imwe.
Kudzidza kuve mutungamiri anokurudzira uye kukurudzira pane kutyisidzira uye kuda hunyanzvi hwakakosha.
Tarenda rekusimudzira vamwe vanhu kuti vatevedze kwaunotungamira yakakosha yekushandira.
20. Team Mweya
Iyi ndeye cliché yechikonzero. Zvakakosha sekukwanisa kutungamira boka kuve kugona kupinza mukati nekusvibisa maoko ako sechikamu chechikwata, kuteerera kune vamwe vanhu mazano uye kushanda pamwe chete kuti usvike chinangwa chakafanana.
Vamwe vanhu vane rombo rakanaka vanozvarwa nehunyanzvi uhu, uye kune vamwe vedu, kutaurirana idambudziko rakakura. Neraki, zvisinei, avo vedu vanowira muboka rekupedzisira vanogona kushanda pariri.
Kugona kutaurirana kwakakosha nekuti, sezvo ndine chokwadi kuti unonyatsoziva, kwete zvese muhupenyu zvinopihwa kwatiri mundiro. Dzimwe nguva zvinotora zvishoma nekudzoka kuti uwane zvinhu zvaunoda kana zvaunoda.
Pane mamwe matekiniki atinogona isu tese kudzidza kushandisa kana tichitaurirana nezvezvibvumirano kuona kuti mapato ese anobatanidzwa anowana mhedzisiro.
Ndiri kutaura zvechokwadi network pano. Kwete iyo mhando kana iwe uchiyamwa kusvika kune vakakosha vanhu nekuda kwechikonzero chekuyamwa kwavari uye kuwana basa rekusimudzira.
Networking inofanirwa kunge iri yekuumba kubatana kwechokwadi nevanhu vanofarira uye vachiita zvakafanana zvinhu sewe, kuitira kuti mose mugone kubatsirana.
Kana izvo zvichiunza basa kana mikana nenzira yako, zvinoshamisa, asi izvo hazvifanirwe kuve chinangwa chikuru, sevanhu vachazokwanisa kutaurira mamaira kure kana uchingozvinyepera.
Isu tese tinopinda mumamiriro ezvinhu anonyengera pano neapo, uye panogara paine nguva apo kubata kwekudyidzana kunokosha.
Kunyangwe iwe uchida kubata mamiriro pakati pako iwe nemumwe munhu kana vamwe vaviri, kugona kuona mativi ese enharo uye nekuuya nemhinduro uchichengeta munhu wese achifara kunogona kubatsira kutsvedza nzira yako yekubudirira.
Isa moyo wako, pfungwa, uye mweya mune kunyangwe zviito zvako zvidiki. Ichi ndicho chakavanzika chekubudirira. - Swami Sivananda
Kugadzira kunogona kureva zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Izvo hazvisi zvekungova wakanaka nebhurashi rependi kana vhiri remuumbi, kunyangwe kuratidza kugona kwako kuburikidza nehunyanzvi kunogona kuve kwakanyanya kurapwa uye nekatari.
Kugadzira kunouya munzvimbo dzese dzehupenyu, se kufunga kunze kwebhokisi inogona kukubatsira iwe zvese nehunyanzvi uye pachezvako.
Iwe unoziva iwo manzwiro aunombopinda mugomba remudumbu mako, kana iyo pfungwa inonetsekana kuyedza kuzviita pachayo kunzwikwa kumwe kunhu mukati mepfungwa dzako?
Vamwe vedu vane nzwisisika kupfuura vamwe , asi hunyanzvi hwatinogona kushandira tese. Kana tikadzidza kuzviteerera, yedu intuition inogona kutinyevera pamberi penguva apo chimwe chinhu chave kuda kuenda chisina kunaka kana kurudyi, zvichireva kuti tinogona kuita zvinoenderana.
Kugona kunzwira tsitsi vamwe uye kuzviisa pashangu dzakanaka hunhu hwevanhu…
… Asi zviri nyore kuzviputira matiri needu matambudziko uye nekukanganwa matauriro atinoita nezvinonetsa zvevamwe.
Hukama hwevanhu migwagwa-miviri, saka paunonyanya kunzwira tsitsi kune vamwe, ivo vanowedzera kunzwira tsitsi ivo vanogona kunge vari kwauri, vachikukweretesa ruoko kana kupa rutsigiro iwe paunenge uchipfuura panguva yakaoma.
27. Kuisa Chinangwa
Pasina chinangwa chekuvavarira, zvinonetsa kuwana kurudziro yekuramba uchifambira mberi. Kuti ubude pamubhedha mangwanani ega ega uye upe zuva rako zvese, iwe unofanirwa kuve nechinangwa mupfungwa.
Izvo zvakakosha kuseta zvese kubva pane zvakakura, zvinotyisa, zvakajairwa hupenyu zvibodzwa kusvika zvidiki, zvakanangwa, zvinokwanisika zvinoitika zvinangwa kuitira kuti urambe uchizadzisa izvozvo.
Iri ishoko raunowana rinotyisa here? Zvakanditorera nguva yakareba kuti ndinzwisise kukosha kwekutumirwa, uye kunyangwe kureba kuti nditange kuzviita.
Asi kune maawa akawanda kwazvo pazuva, saka chero mamiriro ako ezvinhu, kutumirwa kunogara kuchikosha.
Dzimwe nguva, uchafanirwa kuendesa nekuti iwe unoziva kuti iwe hauna nguva yekuita zvinhu iwe pachako. Dzimwe nguva, inenge iri nyaya yekuziva kuti mumwe munhu ane hunyanzvi hwakasiyana anogona kuzviita zvirinani kana kukurumidza.
Semuenzaniso, hapana chikonzero chekutambisa maawa enguva yako yakakosha uchirwira nemitero yebhizimusi rako apo nyanzvi ingangozvigadzirisa zvese nekubwaira kweziso.
Inyaya yekuziva kuti masimba ako ndeapi uye usatya kukumbira vamwe vanhu kuti vakuitire zvinhu.
29. Kushungurudzika Kutarisira
Kushungurudzika, zvinosuwisa, chikamu chakakura chinenge cheupenyu hwezuva nezuva hwemunhu wese muzuva rino nezera.
Naizvozvo, zvine musoro, kudzidza kubata nazvo nenzira inobatsira uye inoshanda zvakakosha kuti iwe ugare uchifara uye uine hutano hwakanaka hwepfungwa uye nemuviri.
30. Kutarisisa Kune Ruzivo
Iwo madiki madiki ayo anogona kushanduka kuita akakura chaizvo matambudziko kana iwe ukaramba uchizeveredza iwo. Kutora nguva yekuisa ini uye kuyambuka maT pane kungo tarisa pazvinhu zvikuru zvinogona kubhadhara mukufamba kwenguva.
Saizvozvo, kuterera kuzvinhu zvidiki kunogona kukugadzika uye kukubatsira kumira wakasiyana pakati pevezera rako kana vevanokwikwidza bhizinesi.
Kunze kwehunyanzvi hwese pane urwu runyorwa, iyi ndiyo imwe ingangove yakanyanya kudzikiswa. Tinoda kutaura, uye tinokanganwa kuteerera. Kuteerera kwakakosha nekuda kwezvikonzero zviviri zvikuru.
Chekutanga, tenda kana kwete, tinogona kudzidza chakakura kana isu tikanyatsoteerera kune zvinotaurwa nevanhu vakatikomberedza. Izvi zvinogona kutibatsira kukura munzira dzatingave tisina kufunga nezvadzo.
Kechipiri, nekuteerera zvechokwadi kune vamwe vanhu, tinoratidza kufarira kwedu kwavari semunhu uye nemifungo yavo, zvinoreva kuti maonero avo patiri angangokwira. Shure kwaizvozvo, ivo vanogona kuve vanokwanisa kutiteerera isu patinovada, kana kutikweretesa rutsigiro rwavo.
zvinorevei kana musikana wako achiramba achikupomera mhosva yekubiridzira
Chekupedzisira asi chisiri chidiki hunyanzvi hwekunyengetedza. Kana iwe uchida kubudirira muhupenyu, pachave nenguva zhinji apo iwe pauchazoda kugonesa vamwe vanhu kuti wawana zano chairo, kuti uwane yavo rutsigiro kana rubatsiro.
Iwe zvakare unowanzo fanirwa kuzvinyengerera ... kuzvinyengerera kuti ubve pamubhedha mangwanani, enda kune iyo netiweki chiitiko, tanga hurukuro nemunhu iyeye, uye kungo tora hupenyu ne nyanga, mazuva ese egore .
Nzvimbo chete yekubudirira inouya basa risati rave muduramazwi. - Vince Lombardi
nzira yekukunda chigumbu muhukama
kuziva sei kuti haasi mukati mako
kurambana sei nemunhu
ndiani hama bray wyatt
maitiro ekuudza kana iwe uri wakanaka kutaridzika
wwe imba yemukurumbira 2019 runyerekupe